DAAWO: Puntland oo wada hadal Somaliland kala galaysa dhulka ay ku muransan yihiin.
August 17, 2019 NEWS 2
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta hadal ka jeediyey kulan ka dhacay magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Somaliland kala hadlaan arrimaha labada dhinac ay isku hayaan ee kuwajahan gobalada Sool, Sanaag & Cayn.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in haddii shaatigaaga lagugu qabsado ay tahay in ay wada hadal kagasho, sidaas awgeedna ay diyaar u yihiin in ay Somaliland kala hadlaan arrimaha gobalada ay dhinacyadu isku hayaan.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni “Fariinta ugu horaysa waxaan u dirayaa Soomaaliland, shaatigaaga waa lagugu qabsan karaa, dhulka Puntland ee ay kusoo xadgudubtey , wadahadal iyo nabad inaan ku dhammayno oo ku gar-naqsadaan baan ugu baaqaynaa” Ayuu yiri Madaxweyna Puntland.
Khudbadda Madaxweyne Deni
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni "Fariinta ugu horaysa waxaan u dirayaa Soomaaliland, shaatigaaga waa lagugu qabsan karaa, dhulka Puntland ee ay kusoo xadgudubtey , wadahadal iyo nabad inaan ku dhammayno oo ku gar-naqsadaan baan ugu baaqaynaa" Ayuu yiri Madaxweyna Puntland.Madaxweynaha ayaa fariintani ka yiri bandhigga buugga Diwaanka Nabadda Soomaaliyeed (Hore, Hadda iyo Hadhow ) oo ay qortay aqoonyahanad Deeqa Jaamac Col-u-joog, waxa ay qoraysey buuggaasi muddo ku siman 35 sano, waxaana lagu soo bandhigay xarunta Hay'adda Cilmi Baarista 'PDRC' Garoowe.
Posted by Puntland State House on Saturday, August 17, 2019
Waa markii 2aad oo uu baaqan jeediyo Madaxweynaha Puntland, waxaana uga sii horeeyey Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in ay diyaar u yihiin nabad iyo isdhexgal.
In ay wada hadlaan puntlaan iyo soomaalilaan waa muhiim oo ay ka wada hadlaan dhulka la isku haysto.Hase ahaatee dhulka muranku ka jiro dadka iyo deegaankaba waxaa u badan beelaha Harti Daarood.In beelo Daaroodana ay beel kale xukuntu waa waxaan horay loogu soo arag dunidaan.
Hadii beelihii harti qaar, kaba qaad noqdeen, raali ka yihiin in wax loo yeeriyo ee lagu shaqeysto, sidaasna qaar iyaga ahi ku faanayaan, dagaal haduu dhacana iyagu hubka kuu soo qaadanaya. hade Puntland wixii la gudboon ayey yeeleysaa.